Tijaabada Coronavirus Jumladda |Qalabka Tijaabada Degdegga ah ee Dawada Xad-gudubka & Hormoonka - Hangzhou Testsea Biotechnology Co., Ltd.
Baaritaanka Antigen-ka ee COVID-19 xaashida aan la jarin
Waxaa la aasaasay 2015 iyada oo la raadinayo "bulshada u adeega, adduunka caafimaadka" diiradda saaraya R&D , wax soo saarka , horumarinta , iibinta iyo adeegga In Vitro diagnostic Products iyo alaabta caafimaadka xoolaha.
Abuuritaanka iyo haynta tignoolajiyada hal-abuurka aasaasiga ah ee alaabta ceeriin iyo ku tiirsanaanta sannadaha maalgashiga joogtada ah ee R&D iyo qaabaynta macquulka ah, testsea waxay dhistay madal lagu ogaanayo difaaca jirka, madal lagu ogaanayo bayoolajiga molecular, madal baadhista xaashida asaasiga ah ee borotiinka, iyo walxo bayooloji ah.
Iyada oo ku saleysan dhufto ee tignoolajiyada kor ku xusan, Testsea ayaa horumariyo khadadka alaabta si loo aqoonsado degdeg ah cudurka fayraska corona, cudurada wadnaha, caabuqa, burada, cudurada faafa, daroogada daroogada, uurka, iwm alaabta Our waxaa si ballaaran loo isticmaalaa in ogaanshaha degdeg ah iyo wax ku ool ah. la socodka daaweynta cudurrada halista ah iyo kuwa daran, ogaanshaha daryeelka caafimaadka hooyada iyo carruurta, baaritaanka khamriga, iyo goobaha kale iyo iibka ayaa daboolay in ka badan 100 waddan iyo gobollada adduunka oo dhan.
Shirkad tignoolajiyada biomedical-ka ah oo diiradda saareysa alaabada ogaanshaha fayraska ee caafimaadka.
Nidaamka R&D Wax Soo Saar oo Dhamaystiran
Shirkaddu hadda waxay haysataa qalab dhamaystiran oo R & D ah, qalabka wax soo saarka iyo nadiifinta
aqoon-is-weydaarsiga aaladaha ogaanshaha ee vitro-ga I reagents I alaabta ceeriin ee POCT, biochemistry, difaac iyo ogaanshaha molecular
Saldhig-soo-saarka reagent IVD
Platform Tijaabo Dadweynaha
Shahaadada Bachelor ama ka sare
Sannadkii 2015, hangzhou testsea biotechnology co., Ltd waxaa aasaasay aasaasaha shirkadda oo leh koox khabiiro ah oo ka socda Akadeemiyada Sayniska Shiinaha iyo Jaamacadda Zhejiang.
2019U dhoofinta suuqa caalamiga ah
2019, samaynta kooxda iibka ganacsiga shisheeye si ay u horumariyaan suuqyada dibadda
Dhowr sano ka dib horumarinta farsamada, soo saar noocyo kala duwan oo alaabooyin tartan ah, sida xirmooyinka baaritaanka clenbuterol, baaritaanka qandhada Swin.
2020Hogaamiyaha dhamaystirka cilmi baarista, horumarinta, wax soo saarka iyo iibinta Sars-Cov-2 ogaanshaha
Markii uu dillaacay faafitaanka fayraska corona dhamaadkii 2019, shirkadeena iyo aqoonyahanka Akadeemiyada Sayniska Shiinaha ayaa si dhakhso leh u horumaray oo bilaabay tijaabada COVID-19, oo ay helaan shahaadada iibka bilaashka ah iyo oggolaanshaha dalal badan, dardar-gelinta Xakamaynta COVID-19 .
2021Ansixinta diiwaangelinta tijaabada Covid-19 antigen ee wadamo badan
TESTSEALABS COVID-19 alaabada tijaabada antigen-ka waxay heshay shahaadada EU CE, Jarmal PEI&BfArm List, Australia TGA, UK MHRA, Thailand FDA, ect
U guuri warshad cusub-56000㎡
Si loo qanciyo baahida korodhka wax soo saarka ee shirkadda, warshado cusub oo leh 56000㎡ ayaa la dhameeyay, ka dibna awoodda wax-soo-saarka sanadlaha ah ayaa kordhay boqollaal jeer.
2022Iibka isugaynta ah ee la gaadhay in ka badan 1 bilyan
Wadashaqeyn hufan oo kooxeed, waxay gaartaa 1 bilyan ee ugu horreeya qiimaha iibka.
Iyada oo leh awoodda iskaashiga kooxeed ee xooggan iyo dadaallada aan joogsiga lahayn, Testsea waxay horey u heshay in ka badan 50 rukhsadyo la oggolaaday, 30+ ka diiwaangashan dalalka dibedda.
CE 1011 Shahaadada
CE 1434 Shahaadada
Boqortooyada Ingiriiska MHRA
Shahaadada FDA ee Philippine
Shahaadada FDA ee Thailand
Aragtida "U adeegida Bulshada, World Healthy", waxaa naga go'an inaan gacan ka geysanno caafimaadka bini'aadamka anagoo siinaya alaabada ogaanshaha tayada leh iyo kor u qaadida ogaanshaha saxda ah ee cudurada ee dhammaan bini'aadamka.
"Sharafnimada, tayada iyo mas'uuliyadda" waa falsafada aan raadineyno, Testsea waxay ku dadaaleysaa inay horumariso shirkad cusub oo daryeel leh oo ixtiraamta bulshada iyo deegaanka, waxay shaqaalaheeda ka dhigtaa mid ku faano oo kasbato kalsoonida muddada dheer ee lammaanaheeda.
Degdeg, degdeg ah, xasaasi ah oo sax ah, Testsea Biologicals ayaa halkan u joogta inay kaa caawiso baaritaankaaga ogaanshaha.
Hal-abuurka Farsamada Cusub
Testsea waxay caqabad ku tahay horumarinta tignoolajiyada cusub iyada oo la adeegsanayo dadaallo cusub oo lagu xaqiijinayo dhammaan fursadaha.Waxaan si joogto ah u baaraynaa oo aan horumarinayna alaabooyinka waxtarka badan leh, oo leh fikrado xor ah oo hal abuur leh, iyo dhaqan urureed degdeg ah oo dabacsan si loo waafajiyo.
Horta Aadamaha ka fikir
Alaabooyinka hal-abuurka leh ee ka socda Testsea waxay ku bilowdaan halgan si nolosha dadka looga dhigo mid caafimaad qaba oo ka sii kobcaysa.Dadka ku nool waddamo badan ayaa ka walaacsan badeecadaha ay ugu baahan yihiin waxayna u heellan yihiin horumarinta wax soo saarka oo faa'iido u leh noloshooda.
Testsea waxay leedahay masuuliyad bulsho si ay u samayso alaab tayo sare leh oo u sahlaysa dadka iyo xayawaanka inay ku noolaadaan nolol caafimaad leh iyada oo loo marayo ogaanshaha hore.Waxaan sii wadi doonnaa inaan nafteena u hurno dadaallo joogto ah si aan dib ugu soo celinno maalgashadayaasha.